‘फलानो’ : अर्थात् राजेश केसी :: Blogs | Buddha Air
‘फलानो’ : अर्थात् राजेश केसी
उनका कार्टुनमा सधैं ढाका टोपी लगाएको एउटा मान्छे हुन्छ–फलानो । सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले । लोकप्रिय कार्टुनिष्ट राजेश केसी पछिल्लो समय एकपछि अकोर् उद्यमशिलताको भर्याङ चढ्दै छन् । फलानो ब्राण्डकै लुगा र कफी घर खोलेसँगै ने पालीमाझ उनको ‘फलानो’ ब्राण्ड स्थापित भैसक्यो ।
ने पाली पत्रकारिता जगतका लोकप्रिय कार्टुनिष्ट राजेश केसीको जीवनमा पहिलोपटक लिखित पाठक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो –०५२ सालमा । झापाली राजनीतिज्ञ एवं चिन्तक सिके प्रसाइँले लेखेको पत्र कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भयो । प्रसाइँले घोषणा गरेका थिए, ‘एक दिन राजेश पनि शंकर जस्तै बन्नेछन् ।’
शंकर एक जना भारतीय कार्टुनिष्टको नाम । कार्टुनिष्ट आरके लक्ष्मण भन्दा अगाडि चर्चित थिए उनी । खासमा आर.के. लक्ष्मणबाटै प्रभावित भएर कार्टुनतिर लागेका कलाकार हुन् केसी ।
के थियो त त्यो कार्टुनमा ?
नेपालमा ०५० सालको बाढीले पुलहरू भत्काएको थियो, ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । राहतको माग बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हेलिकप्टरमा गएर भाषण गरे । त्यही विषयमा केन्द्रीत भएर केसीले कार्टुन बनाए । त्यसमा प्रधानमन्त्री कोइराला र उनका सुरक्षाकर्मी दौडिरहेको र पछिपछि गाउँलेले लखेटेको दृश्य छ । सुरक्षाकर्मी भन्दैछन्, ‘मैले त हजुरलाई भनेकै थिएँ, यहाँ आउँदा कमसेकम के ही बिस्कुट भए पनि ल्याउनुपर्छ ।’
भाषण मात्र राहत लिएर गएका प्रधानमन्त्रीमाथिको तिखो व्यंगचित्र देखेपछि बिरामी भएर आराम गरिरहेका प्रसाईँले हाँसो थाम्न सकेनन् । प्रतिक्रिया नलेखि उनको मनले मानेन । केसीको कार्टुन संग्रहको अन्तिम पातोमा पढ्न पाइन्छ त्यो प्रतिक्रिया ।
आजसम्म उनले हजारौंको संख्यामा कार्टुन बनाइसके । धारिला, चोटिला र पेचिला हुन्छन् उनका कार्टुन । तिनमा आँखा पर्नेवित्तिकै त्यसमा लेखिएका शब्द पढि नभ्याउँदै हाँसो को फोहोरा छुट्न थाल्छ । कहिलेकाहिँ त पेट मिचि मिचि हाँस्नु पर्छ ।
सामाजिक चेत भएका प्रभावशाली कार्टुनिष्ट हुन्–राजेश केसी । पत्रकारिताको पुस्तक भन्छ–‘एउटा तस्बिरले हजार शब्द बोल्छ ।’ त्यसो भए कार्टुनले कति शब्द बोल्ला ? हजारौं शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने कुरा एउटै कार्टुनले बोल्छ । त्यसैले कार्टुन प्रभावकारी सञ्चार माध्यम हो । व्यंग्य मिसिएका चित्रले विसंगती विरुद्ध कडा प्रहार गर्छन् ।
‘म जातिय, धार्मिक र लैंगिक सद्भाव नभड्कियोस् भनेर आफ्ना लागि आफैं लक्ष्मण रेखा तयार गर्छु । सद्भावको सीमा नाघ्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत हुनु पर्छ’, उनी भन्छन् । भ्रष्टाचारीको बोलवाला भएको मुलुक कार्टुन सृजनाका हिसाबले उर्बर मानिन्छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगती विरुद्धै हो कलाकारले धाबा बोल्ने । मुलुकलाई माया गर्ने कलाकार सधैं न्यायपूर्ण समाजको पक्षमा वकालत गर्छ । यस हिसाबले र ाजेश पनि समाज सुधार अभियन्ता हुन् ।
अचेल उनी बाह्रखरी डटकम र अन्नपूर्ण पोष्ट दै निकका लागि कार्टुन बनाउँछन् । उनले कार्टुन यात्रामा धेरै आरो ह–अवरोह पार गरेका छन् । सर्वसाधारणबाट स्याबासी पाए पनि फटाहाहरूबाट धम्की र खप्की व्यहोर्नु परेको छ ।
उनको व्यावसायिक कार्टुन यात्रा कान्तिपुर दैनिकबाट सुरु भएको थियो । त्यसो त विद्यालय जीवनदेखि नै चित्रकलामा रुचि थियो । कक्षा ३ पढ्दैखेरी चित्र बनाएर राष्ट्रियस्तरमा पुरष्कृत भएका थिए । उनको पहिलो कार्टुन राइजिङ नेपालमा छापिएको थियो २०४८ सालमा । उनले हुलाकबाट म यस्तो कार्टुन बनाउन सक्छु भनेर सम्पादकलाई पत्र पठाएका थिए । त्यसको केही दिनपछि सम्पादक श्यामबहादुर केसीको फोन आयो र त्यो कार्टुन कभर पे जमै छापियो । त्यसमा चुनावको टिकट पाउन पार्टी कार्यालयमा भएको भिड दे खिन्छ ।
‘पहिलो कार्टुन छापिँदा आफूलाई सेलिब्रिटी नै सम्झें’, केसी मुस्कुराउँछन्, ‘कार्टुन बनाउँदा मनमा आनन्द मिल्छ ।’
सरकारी मिडिया भएकाले गोरखापत्र संस्थानमा स्वतन्त्र रुपमा कार्टुन बनाउन पाँईदैन थियो । त्यहाँ अडिएन उनको मन । आफ्नै मनलाई बन्धकी राखेर कसैले सृजना गर्न सक्दैन ।
कान्तिपुर दैनिकको प्रकाशन आरम्भ ०४९ फागुन ७ देखि हुन थाल्यो । त्यसमा ‘गजब छ बा !’ स्तम्भमा दिनदिनै कार्टुन बनाउन थाले उनी । उनले कान्तिपुरको नमुना (डमी) अंकमै कार्टुन बनाएका थिए ।
त्यसबेला कान्तिपुरका सम्पादक थिए योगेश उपाध्याय (जो हाल अमे रि कामा छन्) । कार्टुन कलामा सधैं ‘फलानो’लाई उभ्याउन केसीले साधारण मान्छेका ३५ वटा चित्र बनाएका थिए, त्यसमध्ये एउटालाई सम्पादक उपाध्यायसँग बसेर छनोट गरे । जुन फलानो झन् झन् तन्नेरी भएर आज पर्यन्त खबरदारी गरिरहेको छ ।
फलानो नाउँ कसले राखिदियो त ?
बरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले ‘फलानो’ नाउँ जुराइदिएका थिए । कान्तिपुरपछि उनले केही समय हिमाल खबरपत्रिकामा पनि कार्टुन बनाए । समयसँगै कान्तिपुरबाट श्रीसगरमाथा, इन्डिपेन्डेन्ट विक्ली, दृष्टि साप्ताहिक, हिमाल खबरपत्रिका, फेरि कान्तिपुर, दैनिकी, नागरिक दैनिक, सेतोपाटी हुँदै बाह्रखरीसम्म आइपुग्दा उनले धेरै गहकिला कार्टुन बनाए । तिनले जनजनका मनमनमा ठूलो प्रभाव छाडेका छन् ।
पत्रकारिता एवं कलाको ज्ञान र व्यंग्य चेतना भएको कलाकारले मात्र राम्रो कृति सृजना गर्न सक्छ । हरेक कलाकारको आ–आफ्नै शैली हुन्छ ।
हाम्रोमा नेताहरूको काटुर्न धेरै बनाइन्छ । तिनलाई ठ्याक्कै चिन्न सक्ने बनाउनु पर्ने केसी बताउँछन् । नेताको अनुहार र जिउडाल ख्याल गरि न्छ । गिरिजाप्रसादको लामो नाक, माधव नेपालको जुँगा, झलनाथ खनालको पुक्क गाला, प्रचण्डका बाक्ला जुँगा र पछाडि फर्केको कपाल, डा. बाबुर ामको चिउँडो र जुँगा, देउवाको आँखी भुइँ ठूलो, चारपाटे फ्रेमको चश्मा र त्रिकोणात्मक ओठको आकृति बनाइन्छ ।
अब ‘फलानो’ कार्टुनमा मात्र सिमित रहेन, उद्यमी राजेश केसीको ब्राण्ड नै बनिसक्यो । उनी फलानो ब्राण्डमै लुगा र कफीघर चलाउँछन् । उनको फोटो ब्लग फलानो डटकम पनि चालु छ । ट्वीटर हयाण्डल ‘फलानो’मा सवा दुई लाख फलोअर छन् ।
आम मान्छेले उनको कार्टुनिष्ट अवतार मात्र चिनेका छन् । उनी चाहिँ कार्टुनिष्ट भन्दा बढी उद्यमीका रुपमा फैलिँदैछन् । स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत उनको उद्योग विस्तार हुँदैछ ।
उनको फलानो कफीघर र फलानो लुगामा प्रत्यक्ष ४० जनाले रोजगारी पाएका छन् । त्यसैगरी उनले गर्ने आउट सोर्सिङ मार्फत पनि धेरैले काम पाएका छन् । उनकै साझेदारी रहेको बाह्रखरी डटकममा पनि ३५ पत्रकार व्यस्त छन् । उनी दुई वर्षभित्र नवलपरासीमा फलानो रिसोर्ट बनाउन होमवर्क गर्दैछन् ।
हेर्दाहेर्दै उद्यमी बने राजेश केसी
फलानो लुगामा उनी विशेषतः टिर्शट र हुडी उत्पादन गर्छन् । त्यसमा नेपालीपन झल्कने उनका चित्र र कलात्मक अक्षर हुन्छन् । त्यसका ९० प्रतिशत ग्राहक नेपाली हुन् । नेपालमा त लगाउने नै भए, विदेश कोसेली लै जानु पर्दा पनि नेपालीहरू फलानो लुगा नै लान्छन् ।
उद्यमले सन्तुष्टि दिलाएको छ उनलाई । फलानो लुगा सन् २०१२ मा खोलेका हुन् । त्यसको कारखाना हरिसिद्धि, ललितपुरमा छ । आउटलेट चाहिँ हरिसिद्धी फ्याक्ट्री, सुन्धाराको सिभिल टे«ड सेन्टर र पुल्चोकको साझा लाइनमा छ ।
पुल्चोक, साझा यातायात प्रांगणमै छ फलानो कफी घर पनि । यो ०७२ भदौदेखि सञ्चालनमा आएको हो जसले अग्र्यानिक कफी प्रवद्र्धन गर्छ । ललितपुरको ठूला दुर्लुङ क्षेत्रमा उत्पादित कफी खपत गरिन्छ । उनको रे ष्टुँर ामा झानेको मम र कफी बढी रुचाइएका परिकारमा पर्छन् ।
‘ग्रयाब एन्ड गो’ भन्दै कफी बेच्न काठमाडौंमा ५ वटा फ्रेन्चाइज दिने उनको योजना छ ।
‘धरान, पोखरा, वुटवल र चितवनबाट पनि आउटलेट खोल्ने माग आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, हामी हतारिएका छैनौं ।’ युरोप आउटलेटको लागि भने फलानो लुगाको तयारी भैरहेको छ । लुगासँगै कफीघर पनि जोड्दै लाने योजनामा छन् केसी ।
उद्यमी केसीको मन्त्र छ– पहिला आफुप्रति इमान्दार बन्नु पर्छ । व्यापार मा पनि इमान्दारीता र धैर्य हुनुपर्छ । अनि गुणस्तर कायम राखी ग्राहकलाई खुशी पारे, पैसा त आफैं बर्सिन्छ ।
नेपाली उत्पादन विदेशमा स्थापित गराउने उनको प्रयास प्रशंसायोग्य छ । उनको उद्यमशीलताको कथाले धेरैलाई प्रेरित गर्नेछ ।
बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन् उनी । फोटोग्राफी उनको शौख । कान्तिपुर को शनिबारे परिशिष्टांक कोसेलीमा सन् २००१ देखि सन् २००७ सम्म ‘मेरो ने पाल’ स्तम्भमा नेपालको ल्याण्डस्केप, जीवनशैली र संस्कृति झल्कने उनका तस्बिर छापिए । फोटोसँगै गीतको भाका मिलाएको शीर्षक खुब मीठो हुन्थ्यो ।
घुमफिरमा पनि असाध्यै रुचि राख्छन् उनी । अन्नपूर्ण, मुक्तिनाथ, कालापत्थर, राराताल, मानसरोवर धेरैतिर पदयात्रा गरिसके । बेलाबेलामा परि वारिक यात्रा पनि गर्छन् । यात्राका रोमाञ्चक क्षणहरूलाई मनमा मात्रै हो इन, क्यामेरामा पनि संग्रह गर्छन् । फोटो खिच्नै भनेर कालापत्थरको चिसोमा ८ घन्टासम्म बसेको क्षण बिर्सन सकिएला र ! त्यस्तै ५ दिनसम्म कुर्दा पनि मानसरोवरमा कैलाशको टुप्पोमात्रै खिचेर फर्कनु पर्दाको अलिनो क्षण मनमा आलै छ ।
फोटोग्राफीका लागि हेलिटुर समेत गर्छन् । फलानो डटकमले उनको फोटोग्राफी कला झल्काउँछ । उनी मुलुकभित्र बरोबर घुमिरहन्छन् । उनलाई पुगिहालौं जस्तो लागे को भुःस्वर्ग हो– खप्तड ।
उनको शौख संगीतमा पनि छ । गीत गुनगुनाउँछन् । नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङ, आभाष, संजय श्रेष्ठलगायतसँग उनको राम्रो हिमचिम छ । त्यसबाहेक मुलुकका मुर्धन्य स्रष्टाहरू राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, अम्बर गुरुङलगायतसँगको मनग्य भेटघाटबाट उनले धेरै ज्ञान बटुलेका छन् ।
धेरैले थाहा नपाएको उनको अर्को शौख हो–गायन । उनको स्वरमा आधुनिक गीत रेकडेर्ड छन् । सन् १९९० तिर रेडियोमा पनि बज्थे ती । ‘तर थोरै’ उनि भन्छन् । उनले आफैं लेखे, आफैं संगीत भरे र आफैं गाए । संगीत आफ्नो विधा होइन भन्ने लागेपछि उनले गाउन छोडिदिए ।
उनलाई लाग्छ– फोटोग्राफी, चित्रकारिता र संगीत बिना उनको संसार चल्दैन ।
प्रकृतिको सामिप्यताले उनलाई कलाकार बनायो । उनी काठमाडौंको लैनचौरमा जन्मे÷हुर्के पनि स्कुलमा मिन पचासको विदा हुँदा पुख्र्यौली थलो सेहरी (नवलपरासी) पुग्थे । नारायणीको किनारै किनार डुल्थे । थारु समुदायसँग उठबस गर्थे ।
उनको गाउँमा थारु र कुमालका बस्ती छन् । उनी थारु भाषा थारु सरह नै बोल्छन् । ‘कहिलेकाहीं आफूलाई थारु बताउँदा पत्याउँछन् पनि’ उनी खुशी व्यक्त गर्छन् । बाल्यकालमा रमाएको त्यही नारायणी किनारमा ‘फलानो रिसोर्ट’ खोल्ने सपना छ उनको । प्लानिङ गर्न, नारायणीको चिसोमा रमाउन हिजोआज पनि बरोबर त्यतै पुग्छन् ।
सेहरीलाई पर्यटनधाम बनाउने उनको लक्ष्य छ । उनले दुई दशक लामो जापानी नागरिकहरूसँगको संगतबाट अतिथि सत्कार र सेवाको महत्व बुझेका हुन् । मिडियामा छँदै विगतमा उनी ट्रान्स हिमालयन टुर्स, होटल एभरेष्ट भ्यू र सूर्य ट्राभल्समा काम गर्थे । दुई दशकमा उनले हस्पिटालिटी बिजिनेश राम्ररी बुझे ।
उद्यमीका रुपमा स्थापित भैसके पनि उनलाई चिनारी दिलाएको कार्टुनले नै हो । उनी भन्छन्, ‘दिमाग र हात चलुञ्जेल कार्टुन बनाउँछु ।’
फर्केर हेर्दा चिन्तक सिके प्रसाईँको अनुमान सही साबित भयो । उनको आशिबार्द लाग्यो केसीलाई । त्यसैले त फलानो बनेर पत्रकारिताको फूलबारीमा मग्मगाउँदैछन् र ाजे श केसी । उनलाई सफलताको शुभकामना !
मैले कान्तिपुरमा कार्टुन बनाउन थालेको दुई वर्षसम्म धेरैलाई कार्टुनिष्ट राजेश केसी मै हुँ भन्ने थाहा थिएन् । ट्राभल एजेन्सीको काममा एकपटक विमानस्थल पुगेका बे ला दुई बर्षसम्म सँगै काम गरेका त्यहाँका एक कर्मचार ीले मलाई भने, ‘राजेशजी ! हेर्नुस् त यो मान्छेले गज्जब कार्टुन बनाउँछ । सँधै एउटैले बनाउँछ ।’ उनका कुरा सुनेर म मनमनै हाँसे ।
मेरी जीवनसाथी प्रिया थापा नेपाल वायुसेवाको वरिष्ठ एयर होस्टेस हुन् । बिहे अघि ट्राभल एजेन्सीमा काम गनेर् भएकाले उनीसँग देखभेट भैरहन्थ्यो । हाम्रो बोलचाल भने भएको थिएन । उनले पनि ४ वर्षपछि मात्र थाहा पाइन् कि कार्टुनिष्ट राजेश केसी मै हुँ भन्ने ।
एकपटक कान्तिपुर र काठमाडौं पोष्टमा सुस्ता अतिक्रमण गरेको कार्टुन छापियो । त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमो हन सिंह नेपालमा बसेको र खुट्टा चाहिँ आफ्नोतिर राखेको देखाइएको छ । अनि त्यसमा लेखिएको छ ‘ तिम्रो ठाउँमा मैले टेकेको छैन ।’ त्यो छापिएपछि भारतीय दुतावासबाट “पित पत्रकारिता भयो” भन्ने आरोप लगाउँदै कडा पत्र आयो र कान्तिपुरमा छापियो ।
राजाबाट कु भएपछि ०६२÷०६३ को आन्दोलनताका मो बाइल फोन पनि बन्द भयो । सेनाका मान्छे राजेश केसी खो ई भन्दै कान्तिपुरमा आए । उनले राजा र सेना विरोधी कार्टुन नबनाउन संदेश दिए । कु गरेको दोस्रो दिन कार्टुुन छापियो–गर्भवती श्रीमतीका लागि एम्बुलेन्स लिन दौडँदै गरे को । त्यतिबेला विदेशी मिडियाले लेखे कि ‘लेखकहरूले लेख्न नसकेका कुरा नेपालका कार्टुनिष्टहरूले मेटाफोरिक हिसाबले पस्किरहेका छन् ।’
राजाले वैशाख ११ गते सत्ता छाड्नु १९ दिन अगाडि ने पाल म्यागेजिनमा रकेट आकारमा राजदरबार बनाइएको थियो । त्यसमा अंक लेखेर काउन्ट डाउन सुरु भएको संकेत गरि एको छ । त्यो कार्टुन पढेर ‘तँलाई टुँडिखेलमा घिर्साछौं’ भन्ने पाठक पत्रसमेत आएको थियो ।
त्रिशुलीमा बस दुर्घटना बढ्न थालेपछि त्यसको व्यंग्य गदैर् मैले एउटा कार्टुन बनाए । त्यसमा बस चढ्नु अघि पौडी खेल्न सिकेर बस चढ्नु पर्ने बनाइएको थियो । बसमा लेखिएको थियो– स्वर्गद्वारी यातायात । अर्को दिन स्वर्गद्वारी नाउँको यातायात समितिबाट ‘क्षमा माग्नुस्’ भनेर पत्रै आयो ।
रेडियोले दिएको तरकारी बजारको भाउलाई व्यंग्य गरेर ४ वटा मात्रै नम्बर राखेर गृह मन्त्रालयको सम्पर्क नम्बर भनेर लेखेको थिएँ । मान्छेहरू अगाडिको नम्बर आफैं थपेर फोन गर्दा रहेछन् । त्यसरी फोन गर्दा बालुवाटारका सर्बसाधारणको घरमा पुग्दो रहेछ । यसरी फोन आउँदा उनी हैरान भएर दुखेसो पोखे । त्यसैले ‘आज कति कल आयो’ भनेर हरेक साँझ एक हप्तासम्म फोन गरेर मैले उनीसँग माफी मागें ।